လန်ဒန်၊ မန်ချက်စတာ၊ ပဲရစ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ (UPDATE)): မာတင် Vrijland
လန်ဒန်၊ မန်ချက်စတာ၊ ပဲရစ်၊ ဘာစီလိုနာနှင့်ရော့တာဒမ်တို့ကိုအောက်တိုဘာလတွင် 23 နှင့် 24 တို့တွင်အလံတုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းလော။ (မွမ်းမံ)
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	အောက်တိုဘာလ 22 2019 အပေါ်	• 37 မှတ်ချက်
ယနေ့တွင်လန်ဒန်၊ မန်ချက်စတာ၊ ပဲရစ်၊ ဘာစီလိုနာနှင့်ရော့တာဒမ်စသည့် 23 နှင့်အောက်တိုဘာ 24 တို့မှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအား Ole Dammegard မှမှားယွင်းသောအလံ (English: false flag) ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင် UPDATE) ။ အစောပိုင်းဆောင်းပါးတွေမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတိုက်အခံအဖြစ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာမီဒီယာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ole Dammegard ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ချေးငွေများကိုရရှိရန်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအတွက်လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော pawns ထို့ကြောင့်တခါတရံအမှုအရာထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်မှားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သံသယက Dammegard ဟာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ pawn ဖြစ်တယ်။
သူသည်ယခင်က Zen Gardner အမည်ရှိမီဒီယာမှရှေ့တန်းစစ်သားဟောင်းတစ် ဦး ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ ဒီ Zen Gardner (နှစ်ပေါင်းများစွာမီဒီယာတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပြီးနောက်) သည်ဘုရားသခင့်ကလေးများဂိုဏ်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ In ဤဆောင်းပါးတွင် en ဤဆောင်းပါးတွင် မီဒီယာရှေ့လူကြီးတွေကဘယ်လိုထောက်ခံမှုအမြဲရတယ်၊ ပြီးတော့သင်္ဘောကိုနစ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်။ pedophilia ကိုချီးကျူးပြီးအခြားတစ် ဦး သည်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွင်တိုက်ရိုက်သေကြောင်းကြံသောနတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်လာသည်။ ထိုဆောင်းပါးများကိုလေ့လာပြီးထိုဆန့်ကျင်သောကစားခြင်း၏ကစားနည်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
Dammegard သည်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခြေရာခံရန်လာမည့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ (သူကိုယ်တိုင်ပြောသကဲ့သို့) အပေါ်အခြေခံသည်။ သူကသတင်းအချက်အလက်တွေပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိသည်။ ငါစိုးရိမ်တာကငါတို့မှာတစ်ခုရှိနှင့်ပြီလို့ဆိုလိုတယ် လုံခြုံရေးပိုက်ကွန် frontman ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည် မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမဆိုအမှန်တရားရှာဖွေသူများသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်သူအားလုံးကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သောသူရဲကောင်းဖြစ်သည်။
ငါသိသည်နှင့်အမျှထို (မှားယွင်းသောအလံ) တိုက်ခိုက်မှုသည်အမှန်တကယ်လာလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မအံ့သြသင့်ပါ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'အမှန်တရားအသိုင်းအဝိုင်း' အသစ်တစ်ခုကို online မှရရှိနိုင်ပြီး၊ အမှန်တရားအသိုင်းအဝိုင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အိတ်ကပ်ထဲ၌လုံးလုံးလျားလျားရှိနေလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှေ့တန်း (Ole Dammegard) ကိုစောစီးစွာစတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံများ၏ကစားနည်းကိုဆယ်စုနှစ်များစွာကစားခဲ့သည့်နည်းတူယခုအချိန်သည်လည်းဖြစ်သည်။
Ole သည်သူ၏သတင်းအချက်အလက်များကို Crisis Solutions (криз-solutions.com) ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းဗိုက်ကသူသည်သူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအလံအလံစစ်ဆင်ရေးများကိုထိန်းချုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများမှရရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Dammegard သည်မနက်ဖြန်နှင့်နက်ဖြန်နောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြို့ငါးမြို့တွင် 39 တိုက်ခိုက်မှုများကိုခန့်မှန်းသည်။ (အကြမ်းဖက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သော) အလံအလံစစ်ဆင်ရေးကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာ "ပင်လယ်လင်းယုန်" စစ်ဆင်ရေးကိုသက်ဆိုင်လိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ဆွီဒင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံတွင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အလံအလံအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလည်းသံသယရှိခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအင်တာဗျူးတွင် Dammegard ကအခြားမီဒီယာ၏ဂုရုများအဖြစ်လှပစွာဖော်ပြပုံကိုသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပါ။ ကျွန်တော်အဲဒီလူကိုမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝဘ်လင့်ခ်နှစ်ခုနဲ့အထက်မှာဖော်ပြထားတာတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အကြမ်းဖက်လေ့ကျင့်ခန်းသာမကအမှန်တကယ် (အလံအတုအယောင်စစ်ဆင်ရေး) တိုက်ခိုက်မှုများနောက်မှလိုက်လျှင်သင်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများက Ole Dammegard နှင့်အခြားမီဒီယာများကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းများသည်အပြစ်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသတိပြုမိကြသဖြင့်ထိုနေ့တွင်အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ရန်ထိုလေ့ကျင့်ခန်းအခြေအနေကိုအသုံးပြုကြသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ Blackjack တွင်အပြစ်တင်ခံထားရသော (ထိန်းချုပ်ထားသည့်) အခြားမီဒီယာများသည်အင်တာနက်ပေါ်မှပင်မမီဒီယာမဟုတ်သောအရာအားလုံးကိုထာဝရဖယ်ရှားပစ်ရန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မီဒီယာကိုအခြားလျှို့ဝှက်မီဒီယာများက“ တတ်နိုင်သမျှလျှို့ဝှက်” နည်းလမ်းဖြင့်စီစဉ်ထားသည့်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ယူခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာများကအကြမ်းဖက်အုပ်စုများကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးခဲ့သည်ဟုပြောနိုင်သည် ရုံ လူတိုင်းကလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဟုထင်နေစဉ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။
ရဲနှင့်စစ်တပ် (အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဟုယူဆရသောတိုက်ခိုက်မှုအတုအယောင်ဖြစ်သည့်အခါမှားယွင်းသောအလံကြောင့်) ပင်လျှင်အမှန်တရားရှာဖွေသူများသည်၎င်းတို့၏ကင်မရာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည် (အရာအားလုံးကိုရိုက်ကူးရန် Dammegard ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုကြည့်ပါ) အကြမ်းဖက်အုပ်စုများကသူတို့၏လုပ်ငန်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်နောက်ထပ်အကူအညီများပေးခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောကြောက်မက်ဘွယ်သောအ 911 ၏ဇာတ်လမ်းလေ့ကျင့်သည်မဟုတ်လော ထိုအချိန်တွင်ပင်လေကြောင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ NORAD မှလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်လေအာကာသကိုညှိနှိုင်းပေးမှာလဲ။ ထို့ကြောင့်နက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှိုင်းလုံးကြီးနှင့်နက်ဖြန်နောက်တစ်နေ့တွင်အခြားမီဒီယာများအားအတူတကွတာ ၀ န်ယူရန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်အကြမ်းဖက်လေ့ကျင့်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအစောပိုင်းဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများနှင့်အတူအခြားမီဒီယာများသည်ပူးတွဲတာဝန်ယူရသည်။
ဘယ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်မယ်၊ (1) Ole Dammegard သည် Truth လှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်လာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအပေါင်ခံအာဏာဖြစ်လာသည် of (2) သူသည်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များအားသူအားထင်ရှားပေါ်လွင်စေသောနေ့စွဲများတွင်ကော်ဖီဆိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာ ၀ န်ယူသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ (သို့မဟုတ်အလံအတုအယောင်တိုက်ခိုက်မှု) များပေါ်ပေါက်မလာကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောအလံကြောက်မက်ဘွယ်လှိုင်းအတု၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥရောပသည်စီစဉ်ထားသည့်ကြီးမားသောပရမ်းပတာဖြစ်ရပ်များအတွက် kickstart ကိုသုံးနိုင်သည်။ အကယ်စင်စစ် Brexit ယခုနောက်ဆုံးတော့တစ် ဦး debacle အတွက်တက်အဆုံးသတ်ပုံရသည်သောယခုအချိန်တွင်။ သူတို့ဟာပရမ်းပတာဖြစ်ရုံမျှမကလိုချင်တယ်၊ 'Ordo ab Chao' အတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Dammegard သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်ရဲ၊ စစ်တပ်နှင့် 'လူမှုရေးလုပ်သားများ' ကိုရိုက်ကူးခြင်းအတွက်အတိအကျတားမြစ်ရန်အုတ်မြစ်ချနိုင်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်တိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်လေ့ကျင့်မှုလက္ခဏာများမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် Dammegard ၏အခန်းကဏ္ I သည်ကျွန်ုပ်အားသူကိုယ်တိုင်ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သဖြင့်နည်းဗျူဟာဟောင်းအတိုင်းသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူသည်သူရဲကောင်းမဟုတ်၊ ရဲနှင့်စစ်တပ်ကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်အကြမ်းဖက်သမားများကိုကူညီရန်အဖော်များမဖြစ်လာခဲ့ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ သူသည်အခြားမီဒီယာများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထပ်မံအားနည်းသွားစေနိုင်သောသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ ထိုသို့မဖြစ်မှီသူသည်မိမိအဆွေခင်ပွန်း Zen Gardner ၏ဘုရားသခင့်ကလေးများဂိုဏ်း၏အသင်း ၀ င်နှင့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ကလေးများနှင့်လိင်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအစွန်းရောက်မှု။ Ole Dammegard သည် shill ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးယခု၎င်းကိုထပ်မံသက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် pawn တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်နေကြတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေရာတိုင်းမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်ပြန့်တိုးပွားလာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကအကြီးအကျယ်အရှုပ်တော်ပုံနဲ့အရာရာကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ငါများစွာသောယခင်ဤဆောင်းပါး၌ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ငါငါ့အမှုကိုဆက်ထားခဲ့တယ်
သတိရပါ၊ Ole Dammegard ကဲ့သို့လူများသည်အမှန်တရားတစ်ဝက်ကိုပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများအဖြစ်ဆက်လက်ကြေညာနေကြသည်။ ထောက်ခံသူတွေအများကြီးစုဆောင်းပြီးအရှက်ရအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအရှက်ရစေတယ်။ Zen Gardner သည်လည်းထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ Willem Felderhof (Open Mind Conference) နှင့် Ole Dammegard တို့ကဲ့သို့သောသူများသည်ပါ ၀ င်ရန် ၀ မ်းသာသည်သာမက Ella Ster ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ အဲ့ဒီတောင်တန်းတွေကနေဝေးဝေးနေဖို့ကျွန်မအကြံပေးတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ - 22 အောက်တိုဘာ 2019 16: 47
အဆိုပါ 2023 နှစ်ပေါင်းဥရောပအော်တိုမန်အင်ပါယာသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်
ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှု 'မတော်တဆမှုများကိုရိုက်ကူးခြင်း' ရဲကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း 'ကိုတားဆီးရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလော။
Strasbourg ခရစ္စမတ်အကြမ်းဖက်များနှင့်ရမ်းပြေးအကြမ်းဖက်သမားအလွန်အချိန်မီပုံရသည် (ကြိုဆို EUROGENDFOR)
AIVD ၏“ အကြမ်းဖက်သည်စောင့်ရှောက်သူ” ဖြစ်သည်
Tags:: 5, ဘာစီလိုနာ, အကြပ်အတည်း, မမှန်သော, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အလံ, နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံ, လန်ဒန်, မန်ချက်စတာ, NORAD, လေ့ကျင့်, Ole Dammegard, စစ်ဆင်ရေး, ပဲရစ်, ရိုတာဒမ်, ပင်လယ်လင်းတ, ဖြေရှင်းချက်, မြို့ကြီးများ, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ, အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ, မှားယွင်းသောအလံ, ငါး, ဆွီဒင်
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 17: 25
ဒါကြောင့်သင်ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်အဓိကအောင်မြင်မှုရနိုင်သည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်တားမြစ်ချက်ကိုနားလည်ရန်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အကြံပေးချက် - ဒီအာဏာပိုင် Ole Dammegard ကိုနားမထောင်ပါနဲ့
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 18: 16
အမှန်တရားရှာဖွေသူများသည်မကြာမီ (လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုများပေါင်နှံမှုကြောင့် - Ole Dammegard) အားအကြမ်းဖက်သမားအသစ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သူတို့ကအကြမ်းဖက်အုပ်စုများကိုလေ့ကျင့်ခန်းရက်စွဲနှင့်တည်နေရာများကိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကူညီပေးခဲ့ပြီးရဲနှင့်စစ်တပ်ကိုရိုက်ကူးရန်လူတို့အားစေခိုင်းခဲ့သည် (အကြမ်းဖက်သမားများအားထပ်မံတုံ့ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်) ။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 18: 02
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 18: 42
ငါဒီမှာ "Inofizielle Mitarbeiter ဖြစ်လာသည်" ကိုကြားသလား။ DDR ခေတ်ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြောင်းသတိရသည်။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 19: 40
ဘာကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲအောင်လုပ်ရတာလဲ Herr Oberst နဲ့သူ့ Ministerium für Staatssicherheit ကိုကူညီပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အတူတကွအားကောင်းတဲ့ because
3 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 17: 03
ကျွန်တော်တို့ဟာ salmon နဲ့ martin အနည်းငယ်ကိုပုံကြီးချဲ့မထားဘူး ... ရဲပြည်နယ် hahaha
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 21: 33
Ole ၏ဗီဒီယိုညာဘက်ထောင့်ရှိတံဆိပ်ကိုကြည့်ပါ။ သင်အမှန်တရားရှာဖွေသူကိုသင်အမှန်တကယ်ကြေငြာသည့်အခါအဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားလှသောသင်္ကေတများဖြစ်သနည်း။ သို့ဖြစ်လျှင်သံသယမျိုးစေ့ကြဲရန်လိုအပ်ပါသလား?
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 37
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာ Ella ster ကိုဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ Pegida သရုပ်ပြလှောင်ပြောင်မှုကနေသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ MartinVrijland ရုပ်ရှင်ပြန့်ပွားတာမဟုတ်ဘဲသိုးရဲ့အဝတ်အစား Olle damnguard ရှိဝံပုလွေတစ်ကောင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။
Martin Vrijland ၏ကြေညာချက်များသည် OM တွင်အဘယ်ကြောင့်အလေးအနက်ထားခြင်းမရှိခဲ့သနည်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ blogger ကိုလူတွေမစစ်ဆေးနိုင်လို့ပါ။
အလေးအနက်အချက်အလက်များဖြင့်မည်သည့်အခါကမျှထောက်ခံအားပေးခြင်းမရှိဘဲစကားပြောပြီးထိမှန်ခဲ့သည့် Dammgard ။ Olle Dammgard လိုလူတွေဟာတောင်မှအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးမြေအောက်မှာရှိတဲ့သစ္စာဖောက် (ခုခံလှုပ်ရှားမှု) ကဒီလိုပုံစံမျိုးပြောဖို့အတွက်နောက်ကျောမှာမင်းရဲ့ယူနီဖောင်းပါသောစစ်သား ရိုက်။
ထိန်းချုပ်ထားသည့်အတိုက်အခံ WantToKnow, EllaStar, Niburu.co နှင့်အခြားသူများနှင့်ထပ်တူပြောပါ။
၎င်းသည်ဆင်ဆာမခံရသည့် Icke ကဲ့သို့သောအပေါင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီအိုင်အေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောကြေငြာချက်များပြုလုပ်ပြီးနောက်ဆုတ်ယုတ်မှုများကိုမျှော်လင့်သင့်သည်ထက် ပို၍ ပြုလုပ်ပါက၊ Olle မဟုတ်ပါ၊ သင်ထင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ Olle သည် ဆက်လက်၍ နိုးထနေသောလူအုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ နားထောင်ခြင်းမပြုကြနှင့်
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 50
"နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်" ကိုဖော်ထုတ်သူတစ် ဦး သည် PsyOps နှင့် "Problem, Reaction, Solution" အကြောင်းပြောသောသူသည်အာဏာ၏အပေါင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူအများကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင်သည်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အဖြစ်သင် pawn ကိုခန့်အပ်မှသာလျှင်အာဏာရအာဏာသည်အတိုက်အခံကိုသူ၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုသိသည်ကိုသင်သတိပြုရမည်။
ထိုသို့သောကောင်းစွာနှိမ်နင်းနိုင်သည့်အတိုက်အခံအပေါင်သည်အမှန်တကယ်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူများနှင့်အတူအရောင်နှင့်အရသာတူသော chameleon တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းခက်ခဲစေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dammegard လိုလူတစ်ယောက်ကရော Robert Jensen လည်းငါယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေကိုအတိအကျကူးယူဖို့ကြိုးစားနေလို့ပဲ။ ကျွန်တော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသာပိတ်ထားတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာဆင်ဆာဖြတ်တောက်ထားတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူတို့သည်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ခံရသည်။
တစ် ဦး ကအလွန်ခေတ်မီပြီးစမတ်မဟာဗျူဟာ။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 58
အလွန်သန့်စင်ပြီး၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ပညာသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဆောင်နေသည်၊ ၎င်းသည်လူအများအတွက်မဟုတ်ဘဲလူတိုင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ပိုပြီး ဖြစ်လာသည်။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 23: 39
စကားမစပ်, xandernieuws မေ့လျော့ခဲ့သည်, semi-ကြေးနန်းသတင်းစာသို့မဟုတ်ပိုပြီးရှိပါတယ်ကဲ့သို့ထိပ်တန်းထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံ။
ထို ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအားလုံးသည် Olle Dammegard ၏သတင်းများကို စုပေါင်း၍ ဆက်သွယ်ရမည်ဟုထင်ရသည်။ မိုးရေဒါရွာတာမို့ငါတို့အားလုံးအတွက်သိပ်မဆိုးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ "ရေဒါတိုက်ခိုက်မှု" ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည် Xandernieuws (သို့) Telegraaf သို့မဟုတ် ellastar အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ole ဟာမှန်တော့မယ်၊ ပြီးတော့သူဟာပူးပေါင်းကြံစည်မှုထဲမှာရှိနေတယ်။ သူကအဲ့တာမမှန်ဘူးလို့ယူဆရင်လှုံ့ဆော်မှုဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာလို့ခေါ်တယ်၊ အခြားမီဒီယာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်မယ်၊ ဒါပေမယ့် Ole ကဆင်းသွားမှာပါ။
သူတို့သက်သက်သာ messenger ကြောင့်ကြောင့်ကြွင်းသောအရာဆက်လက်။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 23: 44
ကောင်းပြီ .. De Telegraaf သည်ပင်မ PsyOp ၏အခန်းကဏ္ plays နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်၏အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
Vrijland ၏အရောင်များကို chameleons များကဲ့သို့ကောက်ယူသောလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာများ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကကျန်အရာများကိုပြုလုပ်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသောအခြားရွေးချယ်ထားသောဆိုဒ်များသည်လုံခြုံမှုအသားတင် pawn များနှင့် Vrijland ကိုတိတ်ဆိတ်စွာသာသတ်ပစ်နိုင်သည်။
ယခု Xander ... မှလွဲလျှင် ... ယခု Geenstijl နှင့် Jensen နှင့်အချိတ်အဆက်ကိုရုတ်တရက်ဖြစ်စေရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း2ဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်အမြဲဖော်ထုတ်နေသောကြောင့်
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 05: 33
သငျသညျအထကျရှင်းပြသောအရာကိုငါကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်များနေစေသည့်အရာမှာဤ site သည်အကျွမ်းတဝင်အမှတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်ဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဒီသင်္ကေတအမှတ်အသားကိုကြည့်တဲ့သူအရေအတွက်တိုးများလာတယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာမင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကဘာလဲ။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 07: 14
Martin Vrijland ကို Jensen ကဲ့သို့ပင်အသက်မရှင်ဘဲဖော်ပြခြင်းခံရသည်ကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ သူတို့ကတကယ်ကိုလူတိုင်းကဖြတ်သန်းမရလေးစားမှုဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
xandernieuws အားတုံ့ပြန်မှုများအနက်ဥပမာအားဖြင့်အမှန်တကယ်အခြေအနေကိုနားလည်သောတုံ့ပြန်မှုများရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားမိသည်။ အခုတော့သေးငယ်တဲ့ရေနံ slick ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းပိုကြီးနှင့်ပိုကြီးလာပြီ။ သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့ဖမ်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်နောက်ကျသွားပြီ။
22 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 21
Ole ကဒီ website မှာဖတ်မလား။ တစ်မိနစ် 14: 21 တွင်သူက“ ဒါဟာပြProbleနာဟောင်း၊ တုံ့ပြန်မှု၊ ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အခြေခံတယ်” ဟုပြောပြီး၎င်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ထပ်တလဲလဲပြောဆိုသည်။
ကျနော်တို့ဒီမှာစစ်တမ်းကောက်နိုင်ပါတယ်။ မာတင်ပြောတဲ့ဘယ်မြင်ကွင်းပြည့်စုံလာမလဲ။ 😉
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ2ဇာတ်လမ်း script ကိုအဘို့အလိုချင်ဆုံးဖြစ်ထင်ပါတယ်။ တစ် ဦး တည်းပိုကြီးတဲ့အုပ်စုတစ်စုတည်းသွားကစားခြင်းထဲကထားနေသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့်အဓိကထုတ်လွှင့်မီဒီယာတို့တွင်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာများကိုရည်ညွှန်းကိုးကားလျက်ရှိသည်။ မီဒီယာကိုသူ၏ရှပ်အင်္ကျီအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်မှာအလွန်လှပသောအချိန်ဖြစ်သည်။
အမှုအရာစီစဉ်ထားသည်အတိုင်းမသွားဘူးဆိုရင် 1 ဇာတ်လမ်းကကောင်းတဲ့ backup အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ၎င်းအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောတိုက်ခိုက်မှုများသည်တောင်မှပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ဘာမျှမဖြစ်ပျက်လျှင်, Ole အလိုအလျောက်အားလုံး - သိ။ သုခချမ်းသာမှမြှင့်သည်။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 04: 21
အရာအားလုံးကိုရိုက်ကူးတာကဒါကိုမထုတ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားလုံးပြီးစီးပြီးသည်အထိစောင့်ပါ၊ ထို့နောက်၎င်းကိုအွန်လိုင်းတွင်တင်ပါ၊ သို့မှသာတရားဝင်ဇာတ်လမ်းအားမှားသွားနိုင်သည်။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 08: 32
အဘယ်သူမျှမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဆရအဆိုပါအငြင်းအခုံအကြမ်းဖက်သမားတွေ (ဘာမှဖြစ်ပျက်လျှင်) ကြီးမားသော data..th ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့အသုံးပြုသည်: (ဖုန်းများမှ privacy ကိုခွင့်ပြုချက်မှတဆင့်စုဆောင်းနိုင်ဒေတာများ (installed Apps ကိုပြီးနောက်) ။
"အကြမ်းဖက်သမားများ" ကကြီးမားတဲ့ဒေတာ (hacking servers) ကိုရယူနိုင်ရင်သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရှိလိမ့်မည်။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 05: 40
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 08: 48
Ole အကြီးအကျယ် attacked..leus Ole ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပုံမှန်လုပ်ဖို့သူ့အလုပ်ပဲ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်အမှန်တရားရှာဖွေသူများသည် Dammegard မှတစ်ဆင့်ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံနေရသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ များစွာသောလူတွေကဒီလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုလိုက်ပြီးပြေးကြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။
chameleon ကောင်းတစ်ယောက်အနေနှင့် Ole Dammegard သည်ထိုစာသားများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 08: 49
Alfred Lambremont Webre ... နောက်ထပ်စိတ်ကူးယဉ်ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံ pawn
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 08: 58
Ole သည်စျေးကြီးသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှု။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစွန့်စားမှုများကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။
သူ၏အခန်းကဏ္: မှာဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်အထူးသဖြင့် 'ကြောက်ရွံ့ခြင်း' ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် Ole ကဲ့သို့သောသူရဲကောင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 09: 42
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 06: 05
ဒါဟာ Ole ထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံကြောင်းမှန်သည်ယူဆ။ သူကိုယ်တိုင်သိသလား။ သူသည်နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်၏အသိစိတ်တစ်ခုလောသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းခံရသူလား။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 08: 43
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 10: 54
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 17: 13
Ole Dammegard သည်စီအိုင်အေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်သောလူများ။
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 32
ကောင်းပြီဒါဟာပြင်းထန်သောကြောက်မက်ဘွယ်သောနေ့ Ole ပဲ!
23 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 33
24 မှအောက်တိုဘာလ 2019 12: 17
39 အရေအတွက်ကသာကိုက်ညီသည်။ (Ole)
24 မှအောက်တိုဘာလ 2019 16: 33
ပြီးတော့ Pauw မှာပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုကိုမနေ့က .. ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး 39 ကိုယ်ထည်ကိုထရပ်ကားတစ်စီးမှာလိုက်ခဲ့ရသည်။
24 မှအောက်တိုဘာလ 2019 16: 35
39 ကိုယ်ထည်သည် 39 တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်မတူညီသော်လည်းကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသတိထားမိသည်။
25 မှအောက်တိုဘာလ 2019 19: 25
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 05: 54
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 12: 31
ကောင်းတယ် Ole ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ole ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နေတိုးတပ်ဖွဲ့သည်အလံအလံလွှင့်ထူရန်အလျင်အမြန်အတူတကွစုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။
Wow WauW WauWW !!! Ole ဟာသူရဲကောင်းပဲ။
1 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 09
ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများတွင်သင်္ကေတနှင့် / သို့မဟုတ် NLP နည်းစနစ်များသည်မည်မျှအထိသွားနိုင်မည်နည်း။
ငါမြွေ၏အရေပြားကိုငါ့ကိုသတိပေးကြောင်း Ole ၏ပဝါအားဖြင့်အာရုံဖြစ်ကြောင်းကိုသတိထားမိသောကွောငျ့ငါမေးတယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ Ole ရဲ့အမြင်ကိုလည်းငါသတိထားမိတယ်။ သူသည်အနီးကပ်ကြည့်ရှုသူဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူများကိုအောက်သို့ကြည့်သည်။
1 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 59
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 06: 09
အပေါ်က update ကို, 33.39 မိနစ်ဒီမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, ပျော်စရာလူ။
« သင်၏လွတ်လပ်ခွင့်အားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် 'အတွေးရဲတပ်ဖွဲ့' ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအတွက်နက်ရှိုင်းသော 'တစ္ဆေမိသားစု' PsyOp (အပိုင်း 3)
Pathéရုပ်ရှင်ရုံ Groningen တွင် Gina နှင့် Marinus ကိုနှစ်ဆလူသတ်မှု »
guppy op စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်
Zonnetje op Robert Jensen ၏ "Donald Trump သည်ကမ္ဘာသစ်အစီအစဉ်ကိုမယုံဘူး" ကသက်သေပြသည်။ Jensen.nl သည်အတိုက်အခံကိုထိန်းချုပ်သည်
ZalmInBlik op စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်
ချင်းက op စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်
Zandi မျက်လုံး op သရဖူသကျသခေံနှင့်ပြည်နယ်နှင့် proxy ရာဇဝတ်မှုအကြားဂိမ်း (ရှေ့နေ Meijering နှိုင်းယှဉ် Plasman)
1.682 သည်အခြား subscriber များအား join